प्रचण्ड समुहले ट्याक्सीसँगै मलाई पनि जलाउन खोजे, भागेर बाँचे भन्दै चालक रुदै मिडियामा, डरलाग्दो घटना – Online Nepalaja
February 4, 2021 99
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बिहीबार देशव्यापी आमहड्तालको घोषणा गरेको छ । प्रचण्ड नेपाल पक्षको केन्द्रीय संघर्ष समितिले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै देशव्यापी आमहड्तालको घोषणा गरेको हो ।
आमहड्ताललाई शान्तिपूर्ण बनाउने बताइएपनि बिहीबार बिहानै काठमाडौँको गोंगबुमा एक ट्याक्सीमाथि आगजनी भएको छ । कुम्भ नारायण श्रेष्ठको प्रदेश ३–०१ ००२ ज ५८८१ नम्बरको ट्याक्सीमा आगजनी भएको हो । कुम्भ नारायण श्रेष्ठले दुई अज्ञात व्यक्तिले रोकिरहेको ट्याक्सीमा आगजनी गरेर भागेको अनलाईन टिभीलाई जानकारी दिए ।
अनलाईन टिभी नेपालसंग कुरा गर्दै ट्याक्सी चालक कुम्भनारायणले आफूलाई भित्रै राखेर दुईजना व्यक्तिले ट्याक्सीमा आगो लगाएको बताए । सिट बेल्ट खोलेर भाग्न केही बेर ढिला भएको भए आफू पनि ट्याक्सीसँगै खरानी हुने उनले रुदै बताए । हेर्नुस भिडियो
युवतीहरु आकर्षित गर्ने तरिका यस्तोपो रहेछ !!!!प्रेममा आर्कषण महत्वपुर्ण हुन्छ । आफूले मन पराएको मान्छेलाई आफूप्रती आर्कषित गर्ने सबैको चाहना हुन्छ । यस्तोमा मन पराएकि युवतीलाई कसरी आफूप्रती आर्कषित गर्ने धेरै युवामा दोधार रहने गरेको छ । यसकालागि केही टिप्स अपनाउन सकिन्छ । तर कसरी ?
*) कुनै पनि युवतीलाई आफूप्रती आकर्षित गर्ने चाहाना भएमा पहिलो उनी तपाईंकालागी कति विशेष छन् त्यसमा ध्यान दिनुहोस् । सम्बन्ध जोडियो भने भोलीका अप्ठेरो परिस्थितीमा तपाईहरुको सम्बन्ध बिग्रदैन भने मात्र कसैलाई आफ्नो भाव दर्शाउनुहोस् । अन्यथा कसैको भावनामा खेलेर छाड्ने, धोका दिने वा निश्चित स्वार्थ पुरा गर्ने उदेश्य भए यो अवस्थामा तपाई ती युवतीको पछि नलाग्नुहोस् ।
**) यदि तपाईं कुनै पनि युवतीलाई मन पराउनु हुन्छ भने पहिले आफ्नो व्यक्तित्वमा विशेष ख्याल दिनुहोस् । प्रायः युवतीहरु राम्रो व्यक्तित्व भएको पुरुषलाई मन पराउँछन् । तसर्थ तपाईंले आफ्नो पहिरन, बोली तथा व्यक्तित्वमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ ।
*)कसैलाई आफूप्रती आर्कषित गर्ने अर्को महत्वपुर्ण कुरा हो स्मार्टनेस । कुनै पनि युवती केवल स्मार्ट युवकप्रती मात्र आर्कषित हुन्छन् । यसकालागी बौद्धिकता, व्यवहार र प्रस्तुती राम्रो बनाउन आवश्यक हुन्छ । स्मार्ट मानिसले जो कोहिलाई प्रभावित पार्न सक्छन् ।
*) तपाईं कुनै युवतीलाई मन पराउनु हुन्छ भने लगातार उसको पछाडीमात्र नलाग्नुहोस् । उसलाई आफ्नो प्रेम दर्शाउन मायालाग्दो देखिने वा दुखी बन्ने काम भुलेर पनि नगर्नुहोस् । यसको सट्टा तपाईं आफ्नो जीवनशैली यति आर्कषित र लोभलाग्दो बनाउनुहोस् कि युवती स्वत: तपाईप्रति आकर्षित हुन सकुन् ।
*) तपाईं आफ्नो इच्छा वा शौखलाई उसंग मिलाउनु खोज्नुहोस् । उसको चाहाना के छ वा उसलाई के मनपर्छ त्यसमा विशेष ध्यान दिनुहोस् । उसको मनपर्ने रंग, खाना, वस्तु लगायतका बिषयमा जानकारी राख्नुहोस् र उसलाई आफ्नो शौखको बारेमा पनि बताउनुहोस् । यसले तपाईहरुलाई जोड्ने काम गर्छ ।
Prevबन्द गराउदै हिँडेका पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झाको टाउकोमा प्रहरीको लाठी
Nextप्रचण्डलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन, प्रहरीले लियो यस्तो एक्शन